အော်တို 1+1 မျက်နှာဖုံးစက်
အော်တို 1+2 မျက်နှာဖုံးစက်
အလိုအလျောက်သဲထုပ် Loading Packing Line
အလိုအလျောက်နို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်ထုပ်ပိုးလိုင်း တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သည့်စက် တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံး Flow Wrapper စက် မျက်နှာဖုံးမျက်နှာ မျက်နှာကာကွယ်ရေးထုပ်ပိုးပစ္စည်းကိရိယာများ Facemask ထုပ်ပိုးစက် ရောင်းရန်စီးဆင်းမှုထုပ်ပိုးစက် Flow ထုပ်ပိုးစက်ထုတ်လုပ်သူ အစားအစာထုပ်ပိုးရေးကိရိယာ အစားအစာထုပ်ပိုးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း အစားအစာထုပ်ပိုးစက် အလျားလိုက်စီးဆင်းမှုထုပ်ပိုးစက် KN95 မျက်နှာဖုံးစက် Mask Earloop ဂဟေစက် မျက်နှာဖုံး Flow ထုပ်ပိုးစက် မျက်နှာဖုံး Flow Wrapper မျက်နှာဖုံးအလျားလိုက်အလျားလိုက်ထုပ်ပိုးစက် မျက်နှာဖုံးစက် မျက်နှာဖုံးစက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း မျက်နှာဖုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက် မျက်နှာဖုံးထုပ်ပိုးပစ္စည်း မျက်နှာဖုံးထုပ်ပိုးစက် မျက်နှာဖုံးထုပ်ပိုးစက် မျက်နှာဖုံးထုပ်ပိုးစက် မျက်နှာဖုံးထုပ်ပိုးစက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးနားနားခါးဂဟေဆော်စက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမှုမျက်နှာမျက်နှာဖုံးထုပ်ပိုးလိုင်းပစ္စည်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမှုမျက်နှာမျက်နှာဖုံးထုပ်ပိုးစက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုသမှုမျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုစက် အလိုအလျောက်ထုပ်စက်ကိုရေစာ
အဘယ်သို့သော Flow ထုပ်ပိုးစက်များရရှိနိုင်ပါသည်?
အလျားလိုက် Flow Pack စက်
တရုတ်စက်ရုံ OEM အပြည့်အဝ - အလိုအလျောက်တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သည့်စက်
ရောင်းရန်ရှိသည်! စက်ရုံလက္ကား Semi အလိုအလျောက်ဆေးကုသမှုမျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သည့်စက်!
ရရှိနိုင်စတော့အိတ်! တရုတ်စက်ရုံမှ KN95 မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိုတင်ပို့သည်!
ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်! Semi Automatic Medical မျက်နှာဖုံးဆေးထုတ်လုပ်သူမှတရုတ်ခါးပတ်မှဂဟေဆော်စက်ပစ္စည်းတင်ပို့
မြေညီထပ်,အဆောက်အဦး 7, Changfu စီးတီးကို Creative စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပန်းခြံ, အမှတ်2Xiaoxian လမ်း, Luocun,Shishan မြို့, Nanhai ခရိုင်, Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်နိုင်ငံ
တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံး Flow Wrapper စက်
Mask Earloop ဂဟေစက်
မျက်နှာဖုံး Flow ထုပ်ပိုးစက်
မျက်နှာဖုံး Flow Wrapper
အဘယ်သို့သော Flow ထုပ်ပိုးစက်များရရှိနိုင်ပါသည်? 2021.01.11
အလျားလိုက် Flow Pack စက် 2020.08.24
တရုတ်စက်ရုံ OEM အပြည့်အဝ - အလိုအလျောက်တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သည့်စက် 2020.05.07
ရောင်းရန်ရှိသည်! စက်ရုံလက္ကား Semi အလိုအလျောက်ဆေးကုသမှုမျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သည့်စက်! 2020.04.26
ရရှိနိုင်စတော့အိတ်! တရုတ်စက်ရုံမှ KN95 မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိုတင်ပို့သည်! 2020.04.23
ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်! Semi Automatic Medical မျက်နှာဖုံးဆေးထုတ်လုပ်သူမှတရုတ်ခါးပတ်မှဂဟေဆော်စက်ပစ္စည်းတင်ပို့ 2020.04.22
ဇန်နဝါရီလ 2021 (1)
Withamaximum main feeding belt width of 1200mm and maximum packaging speed of 200 တစ်မိနစ်အိတ်, the sandwich packing machine is designed for producing catering bags of rolls, croissants, caramel, or chocolate cookies.
The centerpiece of Tefude’s new suite of counting systems is the state-of-the-art, ဒုတိယညစ်ညမ်းမှုကိုလျော့ချ, အစားအစာသန့်ရှင်းရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်. အဆိုပါ Mainline ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်, ဘေးထွက်လမ်းသွားလွတ်လပ်သောထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်, directly connect with the front production machine. ရွေးချယ်ထားသောအာဏာကိုဖြန့်ဖြူးဘို့မရရှိနိုင်, ပုံသေလမ်းသွားခွဲခြာ, ပါဝါစတီယာရင်, နှင့်အခြားကိုက်ညီခြင်း devices များ. The sandwich packing machine offers complete flexibility in terms of product type, shape, and size. It can accommodate fresh, par-baked, frozen, and difficult-to-handle raw dough products, whether baguettes, pretzel sticks, rolls, bagels, donuts, or croissants.
အမြန်လင့်ခ်များ PRODUCT သည် သတင်းများ အကြောင်း စက်ရုံ VR ဆက်သွယ်ရန်
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ တယ်လီ : +8613981833201 E-mail ကို : tefudesally@tefude.com နင် : +8613981833201 လိပ်စာ : မြေညီထပ်,အဆောက်အဦး 7, Changfu စီးတီးကို Creative စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပန်းခြံ, အမှတ်2Xiaoxian လမ်း, Luocun,Shishan မြို့, Nanhai ခရိုင်, Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်နိုင်ငံ